Wasaaradda Amniga oo NISA ka dalbatay soo gudbinta sababta loo xiray Muqtaar Roobow | Entertainment and News Site
Home » News » Wasaaradda Amniga oo NISA ka dalbatay soo gudbinta sababta loo xiray Muqtaar Roobow
Wasaaradda Amniga oo NISA ka dalbatay soo gudbinta sababta loo xiray Muqtaar Roobow
daajis.com:- Dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay xaaladda Mukhtaar Roobow (Abuu Mansuur) oo muddo sanado ah u xiran, kaas oo laga soo qabtay Magaalada Baydhabo, xilli uu ahaa musharax Madaxweynaha Koonfur Galeed.
Qoraal kasoo baxay Xafiiska Wasiirka Amniga Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa waxaa faray kusimaha hay’adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka in si deg deg ah uu usoo gubdiyo xogta la xiriirta sababta loo xiray Mukhtaar Roobow.
Sidoo kale warqadda waxaa lagu sheegay in qoyskiisa ay cabasho ka muujiyeen xaaladdiisa caafimaad, sidaa darteed ay doonayaan inay caddaalad helaan.
“Maadama ay si joogta ah ula soo xiriirayeen ehelada iyo wakiilada metala doorasheedka uu kasoo jeeo ayaga oo ka cabanaya in laga warheyn caafimaadkiisa iyo badqabkiisa, sidoo kale dalbaday in loo helo cadaalad maadama uu xiran yahay muddo aad u dheer” ayaa lagu yiri war saxaafadeed kasoo baxay wasaasaradda amniga ee Soomaaliya.
Xariggiisa ayaa sababay in qalalaase uu ka dhaco magaalada Baydhabo ee gobolka Baay, iyadoo lasoo tabiyay in qulqulatooyinkaas ay waxyeello isugu jirtay dhimasho iyo dhaawac ka soo gaartay dad rayid ah iyo dibadbaxayaal taageersanaa Mukhtaar Roobow.